Cefpodoxime (စီပိုဒိုဆိုင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Cefpodoxime (စီပိုဒိုဆိုင်း)
Cefpodoxime (စီပိုဒိုဆိုင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Cefpodoxime (စီပိုဒိုဆိုင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Cefpodoxime (စီပိုဒိုဆိုင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Cepodem®ဟာ ပဋိဇီဝဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှု, အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုင်းရောဂါကူးစက်မှု , အာသီးရောင်ခြင်း, ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးကူးစက်မှု, gonorrhea, အဆုတ်ရောင်နှင့်အူရောင်ငန်းဖျားများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုပါတယ်။
Cefpodoxime (စီပိုဒိုဆိုင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
12 နာရီတစ်ခါ ပုံမှန်သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ သင်ဆေးပြားပုံစံကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်, စုပ်ယူတိုးမြှင့်ကူညီရန်အစားအစာနှင့်အတူသောက်သုံးပါ။
အရည်ပုံစံကို အသုံးပြု နေတယ်ဆိုရင်အစားအစာမစားခင် သောက်ပါ။ မသောက်ခင်ကောင်းစွာလှုပ်သောက်ပါ။
ဆေးကို သတ်မှတ်ပမာဏအတိုင်းအပြည့်သောက်ပါ။ ရောဂါပျောက်သည့်တိုင်အောင်သောက်ပါ။ စောစောရပ်ပစ်လိုက်တာဟာ ရောဂါပြန်ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
Cefpodoxime (စီပိုဒိုဆိုင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Cepodem ကို အကောင်းဆုံးထိန်သိမ်းနည်းကတော့ တိုက်ရိုက်အလင်းနှင့်အစိုဓါတ်ထိတွေ့မှု မရှိပဲ အခန်းအပူချိန်မှာသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆေးထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်, သင့်ရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာပလက်ဆီသင်ကို သိုလှောင်ထားတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောသိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ အခြားCepodem အမှတ်တံဆိပ်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်အထုပ်မှာပါတဲ့ အညွှန်းကိုကြည့်ဖို့နဲ့ သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန် သင့်ကလေးများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာမှာထားရှိပါ။
လုပ်ဖို့မညွှန်ကြားထားလျှင်Cepodem ကိုအိမ်သာ သို့မဟုတ် ပိုက်ထဲ စွန့်ပစ်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါ။ ဒိတ်ကုန်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ်မလိုအပ်သည့်အခါဒီထုတ်ကုန်ကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
Cefpodoxime (စီပိုဒိုဆိုင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါတို့ရှိလျှင် ဆေးမသုံးမီလျှင်သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။ :
– သင်သည်ဆေးဝါးပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် မတည့်ခြင်း
သင်က penicillin သို့မဟုတ်အခြား cephalosporin ပဋိဇီဝဆေးများနှင့် မတည့်ခြင်း
သင့်မှာ အခြားဓါတ်မတညိမှုများရှိခြင်း စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Cefpodoxime (စီပိုဒိုဆိုင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ကိုယ်ဝန်နှင့် နို့တိုက်ကျွေးနေစဉ်အတွင်းလက်ဆီသင်ကို အသုံးပြု ခြင်းရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး လုံလောက်သောအချက်အလက်မရှိပါ။ လက်ဆီသင်ကို အသုံးမပြုမီအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အန္တရာယ်များကိုချိန်တွယ်နိုင်ရန်သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။FDA အရ ဆေးရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်မှုပမာဏမှာ B အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
FDA ရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ဘေးဖြစ်နိုင်ခြေ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းက အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
A = အန္တရယ်မရှိပါ
B = အချို့လေ့လာချက်တွေအရ အန္တရယ်မရှိပါ
C = အန္တရယ် အနည်းငယ် ရှိနိုင်ပါတယ်
D = အန္တရယ်ရှိနိုင်ပါတယ်
X = လုံဝမသုံးသင့်ပါ
N = ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိပါ။
Cefpodoxime (စီပိုဒိုဆိုင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
– ခြေမျကိစိ သို့ ခြေဖဝါးရောင်ရမ်းခြင်း
ရောဂါကူးစက်မှုလက္ခဏာများ (ဥပမာ, အဖျား, လည်ချောင်းနာ)
– ကျောက်ကပ်ပြဿသနာများ(ဥပမာ ဆီးပမာဏအတွက်ပြောင်းလဲမှု)
– ခံတွင်း thrush
– အင်္ဂါဇာတ်ယားယံခြင်း စတာတွေဖြသ်ပါတယ်။
အောက်ပါဆိုးကျိုးများဖြစ်လျှင် ချက်ချင်းဆေးကုသကိုရှာပါ။ဥပမာ အမြင်အာရုံပြောင်းလဲခြင်း , ဝေဝါးခြင်း, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများ စတာတွေဖြစ်ပါတယ်
ဘယ်ဆေးတွေက Cefpodoxime (စီပိုဒိုဆိုင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Cepodem က သင်လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ဆေးတွေနဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရင် သင့်ဆေးအလုပ်လုပ်ပုံပြောင်းလဲတာ ဒါမှမဟုတ် ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေ ရှောင်ရှားရန်, သင် သုံးစွဲနေတဲ့ ဆေးစာရင်း (ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ဆေး, မညွှန်ကြားထားတဲ့ဆေး တွေနှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်ထုတ်ကုန်အပါအဝင်) ကို သင့်ဆရာဝန်နှင့်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတို့အားပြောပြထားသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် သင့်ဆရာဝန်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မည့်သည့်ဆေးကိုမျှ စသောက်ခြင်း, ရပ်ခြင်း , နဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေ မလုပ်သင့်ပါ။
ဆေးနှင့်အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှု ဖြစ်နိုင်သည့်ထုတ်ကုန်တွေကတော့ :
– အစာအိမ်အက်ဆစ်လျော့ဆေးဝါး (ဥပမာ antacids,ranitidine လို H2 blockers)
– ဘက်တီးရီးယားကာကွယ်ဆေး စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Cefpodoxime (စီပိုဒိုဆိုင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Cepodem က အစားအစာသို့မဟုတ်အရက်နှင့်အပြန်အလှန် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပုံပြောင်းလဲရုံမက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရဲ့ အန္တရာယ်ကို တိုးမြှင့်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးမသုံးမီသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့် အစားအစာသို့မဟုတ်အရက် အကျိုးဆက်တွေ ကိုဆွေးနွေးပေးပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Cefpodoxime (စီပိုဒိုဆိုင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Cepodem က သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပိုမိုဆိုးဝါးလာစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးအလုပ်လုပ်ပုံပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကျန်းမာရေး အထူးသဖြင့် ကျောက်ကပ်, အသည်းနှင့် အစာအိမ်ဝေဒနာများရှိပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားအသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Cefpodoxime (စီပိုဒိုဆိုင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အဆိုပါရောဂါအတွက် 12 နာရီကိုတစ်ခါသောက်ဆေး 200 မီလီဂရမ်နဲ့ 10 ရက်သောက်ရပါမယ်။
အဆိုပါရောဂါအတွက် 12 နာရီကိုတစ်ခါသောက်ဆေး 100 မီလီဂရမ်နဲ့7ရက်သောက်ရပါမယ်။
Gonococcal ပိုးကူးစက်မှု – Uncomplicated
Uncomplicated urethral, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ, ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီး အင်္ဂါလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်းအတွက် တစ်ခါသောက် 200 မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
Gonococcal ကူးစက်မှု – Disseminated
တစ်နေ့လျှင် 400 မီလီဂရမ်နှစ်ကြိမ်သောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူထူထပ်သည့်နေရာမှာကူးစက်သော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ : အဆိုပါရောဂါအတွက် 12 နာရီကိုတစ်ခါသောက်ဆေး 100 မီလီဂရမ်နဲ့ 14 ရက်သောက်ရပါမယ်။
အဆိုပါရောဂါအတွက် 12 နာရီကိုတစ်ခါသောက်ဆေး 100 မီလီဂရမ်သောက်ရပါမယ်။ ကူးစက်မှု၏သဘောသဘာဝနှင့်ပြင်းထန်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး14 ရက်အထိ ဆက်သောက်ရပါမည်။
အဆိုပါရောဂါအတွက် 12 နာရီကိုတစ်ခါသောက်ဆေး 100 မီလီဂရမ်နဲ့ 10 ရက်သောက်ရပါမယ်။
Uncomplicated ရောဂါကူးစက်မှု : အဆိုပါရောဂါအတွက် 12 နာရီကိုတစ်ခါသောက်ဆေး 400 မီလီဂရမ်နဲ့7ရက်ကနေ 14 ရက်သောက်ရပါမယ်။
အဆိုပါရောဂါအတွက် 12 နာရီကိုတစ်ခါသောက်ဆေး 100 မီလီဂရမ်နဲ့5ရက်ကနေ 10 ရက်သောက်ရပါမယ်။
ကလေးတွေအတွက် Cefpodoxime (စီပိုဒိုဆိုင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
12 နှစ်နှင့် အထက်: အဆိုပါရောဂါအတွက် 12 နာရီကိုတစ်ခါသောက်ဆေး 200 မီလီဂရမ်နဲ့ 10 ရက်သောက်ရပါမယ်။
12 နှစ်နှင့် အထက် : အဆိုပါရောဂါအတွက် 12 နာရီကိုတစ်ခါသောက်ဆေး 100 မီလီဂရမ်နဲ့7ရက်သောက်ရပါမယ်။
12 နှစ်နှင့် အထက်: Uncomplicated urethral, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ, ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီး အင်္ဂါလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်းအတွက် တစ်ခါသောက် 200 မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
12 နှစ်နှင့် အထက်: တစ်နေ့လျှင် 400 မီလီဂရမ်နှစ်ကြိမ်သောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2 လသားမှ 12 နှစ်သား : အဆိုပါရောဂါအတွက် 12 နာရီကိုတစ်ခါသောက်ဆေး5မီလီဂရမ်နဲ့5ရက်သောက်ရပါမယ်။ တစ်ရက်ကို အများဆုံး 400 မီလီဂရမ် ထိသုံးနိုင်ပါတယ်။
အဆုတ်ရောင်ရောဂါ: 12 နှစ်နှင့် အထက်: အဆိုပါရောဂါအတွက် 12 နာရီကိုတစ်ခါသောက်ဆေး 200 မီလီဂရမ်နဲ့ 14 ရက်သောက်ရပါမယ်။
2 လသားမှ 12 နှစ်သား : အဆိုပါရောဂါအတွက် 12 နာရီကိုတစ်ခါသောက်ဆေး5မီလီဂရမ်နဲ့ 10 ရက်သောက်ရပါမယ်။ တစ်ရက်ကို အများဆုံး 400 မီလီဂရမ် ထိသုံးနိုင်ပါတယ်။
12 နှစ်နှင့် အထက်: အဆိုပါရောဂါအတွက် 12 နာရီကိုတစ်ခါသောက်ဆေး 400 မီလီဂရမ်နဲ့7ရက်ကနေ 14 ရက်သောက်ရပါမယ်။
2 လသားမှ 12 နှစ်သား : အဆိုပါရောဂါအတွက် 12 နာရီကိုတစ်ခါသောက်ဆေး5မီလီဂရမ်နဲ့ 5ရက်ကနေ 10 ရက်သောက်ရပါမယ်။ တစ်ရက်ကို အများဆုံး 400 မီလီဂရမ် ထိသုံးနိုင်ပါတယ်။
12 နှစ်နှင့် အထက်: အဆိုပါရောဂါအတွက် 12 နာရီကိုတစ်ခါသောက်ဆေး 100 မီလီဂရမ်နဲ့5ရက်ကနေ 10 ရက်သောက်ရပါမယ်။
Cefpodoxime (စီပိုဒိုဆိုင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ